Iipeni ze-3D, iipensile ze-3D kunye nabantwana: Uvavanyo lwe-3D Pen-Ikkaro
yokuqalisa >> Ukushicilelwa kwe-3D >> 3D Pen okanye 3D Ipensile kunye nabantwana
Into yokuqala kukuba ANDIKHO apha ukuze ndithelekise iipensile okanye ukucebisa okona kulungileyo kwaye ugcwalise konke oku ngamakhonkco entengiso. Ndifuna nje ukukuxelela malunga namava am kunye neentombi zam ngolu hlobo lwesixhobo esithathwa njengokuqaliswa koshicilelo lwe-3D.
Saqala ngemodeli encinci endiyifumene kwintengiso nge-11-11. Iintombi zam kudala zicela enye kwaye nam bendifuna ukuyizama.
Ithiyori ilula kakhulu. Ubeka i-filament, ulungelelanise isantya, unike iqhosha kwaye i-extruder ikhupha i-filament enyibilikisiweyo ukuze "uzoba" okanye wakhe.
Emva kokuyizama, ndiyakuqinisekisa ukuba ayilula njengoko ibonakala ibukele iividiyo. Andazi ukuba kuya kuba lula ukufezekisa iziphumo ezilungileyo kunye nezinye iimpawu okanye iimodeli, kodwa apha kunzima kwaye ukugqiba ayisiyiyo into endiyilindeleyo.
Kuyinyani ukuba kubantwana kuyonwabisa kakhulu kwaye ukuba ufuna ukugqitywa kobugcisa kukho iipeni ze-3D ezingcono kakhulu kunokuba zilungele kamva.
Ezinye iimodeli eziphambili zineendlela zesantya, ngaloo ndlela ungasoloko uzinika isantya esifanayo kwiinkqubo ezahlukeneyo. Ngeepeni ezifana nale ndiyisebenzisileyo, ayinakulawulwa kakuhle. Awusoze wazi ukuba uyishiya njengoko yayinjalo.
Amacandelo kunye nokusetyenziswa kosiba lwe-3D
Ngakolunye uhlangothi, uhlobo lwezinto ezinokuthi zinyibilike zilawulwa, kwi-PLA yethu kunye ne-ABS pen kunye nale extruder ibekwe kwiqondo lokushisa elifanelekileyo. Qaphela ingcebiso ebekwe kwi-180 - 200ºC
Emva koko ineqhosha lokuqalisa ukuprinta kwaye elikhupha intambo kunye nelinye iqhosha lokutshintsha umcu kwaye liwutsale umva.
Ekugqibeleni, kukho umkhethi wesantya, okwenza ukuba iplastiki iphume ngokukhawuleza okanye ngaphantsi, kwaye kufuneka ufunde ukuyisebenzisa kakuhle kakhulu.
Imizekelo yezibalo ezi-2 ezenziwe ziintombi zam, imoto ye-2D kunye ne-3D sunflower
Njengoko Iiprinta ze-3D i-PLA ikhupha kwisiseko kunye noyilo lonke luyahamba. Ukunqanda oku, sebenzisa iNelly lacquer njengento yokuncamathelisa ngexabiso eliphantsi. Iintombi zam ziyakuthanda ukugalela i-shellac ngaphambi kokuba ziqale ukunyibilika.
Imfihlelo yezi pensile ikwisantya obanika sona. Akunjalo kuyilo lwe-2D, apho unokuhamba ngokukhawuleza, kune-3D enye ofuna ukuthwala i-filament emoyeni ngaphandle kokwayama kuyo. Kule meko kufuneka unciphise isantya apho inyibilika khona ukuze iqine kwangaxeshanye uhambisa ipeni.
Ezinye iimodeli ezaziwayo
Ezi modeli zezezimfundamakhwela kunye nosetyenziso olukwinqanaba eliphezulu, zivumela ukugqitywa okungcono kunye nolawulo oluchanekileyo kushicilelo.
3Doodler Pro+. Le ngokukodwa ndifuna ukuyizama.
Ipeni ye-3D yabantwana
Kukho iimodeli ezikhethekileyo zabantwana. Nangona enye efana nale ndiyithengileyo, bayisebenzisa kakuhle nge-7 kunye ne-9 iminyaka.
I-NULAXY 3D Robot
Ngokukhawuleza ukuba ndizama enye imodeli ndiya kukuxelela kwaye ndithelekise.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nolu hlobo lweepensile ze-3D, unganqikazi ukushiya izimvo.
ISikhokelo Sabaqalayo sisonke kwi-3D yoShicilelo
Iindidi zolondolozo lweshishini
I-MRP: Ukucwangciswa kweMfuneko yeziXhobo
izigaba Ukushicilelwa kwe-3D Ukuhamba kwetikiti
Imibono yeBullet Journal
1 I sebenza njani
2 Amacandelo kunye nokusetyenziswa kosiba lwe-3D
4 Ezinye iimodeli ezaziwayo
5 Ipeni ye-3D yabantwana
6 Eminye imifanekiso